Revolution of Mind – Min Thayt
Tag: Revolution of Mind
၂၀၂၂ ခုနှစ်ထဲ စစ်ရေးရလဒ် ထွက်ပါ့မလား
စိုးရိမ်စရာတွေ ရေးမိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ၁။ မြေပြင်အခြေအနေတွေအရ အထိနာမှုတွေများလာရင်၊ အချင်းချင်း ပြစ်တင်တာ၊ ဆဲဆိုတာ၊ စိတ်ပျက်တာတွေ ရှိလာတတ် ကြပါတယ်။ အဲသည့်အထဲမှာ အဆိုးဆုံးကတော့ တရားခံရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကြောင့်၊ ဘယ်ဝါ့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ အချင်းချင်း ပြစ်တင်မောင်းမဲတာတွေ များလာတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အတွင်းစည်းထဲက ယုံကြည်မှုအချင်းဝက်ကို ပိုပြီး တိုအောင် ဖြတ်တောက်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ယုံကြည်မှုကို...
ဝိဒူရသခင်ချစ်မောင် ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားကိုပဲ ဋီကာချဲ့ပြီး တွေးမိပါတယ်။ “စစ်ဘောင်ကျယ်ရင် ဒီမိုကရေစီဘောင် ကျုံ့တယ်” ဆိုတဲ့ စကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် သဘောနက်ချဲ့ပြီး ကောက်ယူရင်၊ “ဒီမိုကရေစီ ဘောင်ကို ကျယ်အောင် ချဲ့မှ၊ စစ်ဘောင် ကျုံ့မယ်” ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်တွေ့အနေအထားအရ၊ စစ်ဘောင်ကျယ်လာတာကို ကြည့်ရင်၊ ကျနော်တို့ဟာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လတ်တလောအတိတ်ကာလမှာ ဒီမိုကရေစီ...
စဉ်းစားချက် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပဋိညာဉ်အောက်မှာ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခသစ်တွေ မဖြစ်ထွန်းဖို့တည်ဆဲ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခတွေ ရှိနေရင်လည်း စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းအပေါ် ဆွဲတင်ရင်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ထီးရိပ်အောက်မှာ ဖက်ဒရယ်လိုလားသော လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး ခြေစုံရပ်နိုင်ကြဖို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ စစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့၊စစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုလည်း လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေ တညီတညွတ်တည်းဦးဆောင်မယ့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုထီးရိပ်တစ်ခုတည်းအောက် ရောက်ရှိစေဖို့၊တည်ဆဲ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို စစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ ထိထိရောက်ရောက်သွတ်သွင်းဦးဆောင်ဖို့နဲ့ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်မှု ပေးဖို့ ၊ စစ်ရေးအကူအညီတွေ...
၁။ တော်လှန်ရေးမှာ တတ်နိုင်သရွေ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဟာ တိုင်းပြည်ကို ကုသသလိုပါပဲ။ တတ်နိုင်သရွေ့ ပညာဉာဏ်ကြီးကြီးထားပြီး ကုမှ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ သတ္တိနဲ့ သတိလိုပါတယ်။ လူထုဟာ သတ္တိ မသေးဘူး ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သံသယမရှိပါ။ နိုင်ငံတကာကလည်း မေးခွန်းမထုတ်ပါ။ လူထုသတ္တိ ဘယ်လောက် ပြောင်မြောက်...
Min Thayt February 4, 2021 February 4, 2021
• သူခိုးတွေ ပြန်တက်လာပြီ။• သူခိုးတွေ ပြန်တက်လာပြီ။ • ဒီတစ်ခါတော့၊ သူခိုးတွေတင် မဟုတ်။ သူဝှက်တွေလည်း ပါသည်။ သရဲ ၊ သဘက်တွေလည်း ပါသည်။ သူရဲထက် သဘက်က ပိုဆိုးသည်။ တစ္ဆေအခြောက်ခံရသော ဘဝမှ၊ သဘက်များ၏ ဂုတ်ချိုးစားခံရမည့် ကိန်း။ • သူခိုးနဲ့အတူ ဓားပြများလည်း ပါသည်။ လူမိုက်များလည်း ပါသည်။ သူခိုး၊...
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အတန်းကျောင်းဖတ်စာမှာ၊ ပညာသင်ခါ မရှက်ရာ…. ဆိုပြီး သင်ကြားခံရဖူးတာ မှတ်မိတယ်။ မနက်က ရုံးကိုလမ်းလျှောက်လာရင်း၊ ဘာမှန်းမသိ ဒီစကားလုံးက ခေါင်းထဲကို ဝင်လာတယ်။ ပညာသင်ခါ မရှက်ရာ။ ပညာသင်ခါ မရှက်ရာ…..။ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ပညာရှာဆိုတော့၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၊ လူငယ်အရွယ်မှာ ပညာသင်ဖို့ မရှက်ရဘူး…. ရှက်ရင် ပညာရသင့်သလောက် မရဘူးလို့ တွေးပြီး နှလုံးသွင်းမိတယ်။ အခုတော့ လူလည်း...
• မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်း • နန္ဒာသိန်းဇံ • လှိုင်းသစ်စာပေ ၊ ၂၀၁၈ ။ • ဆဌမအကြိမ် ။ လူ့လောကထဲကို ပိုပြီး တိုးဝင်လာရလေလေ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကို ပိုနားလည်လာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘဝတုန်းက သူငယ်ချင်းဆိုတာကိုပဲ ခေါင်းထဲ စွဲနေတယ်။ နည်းနည်းကြီးပြင်း လာတော့၊ သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ ဘာလဲလို့ စဉ်းစားတတ်စ ပြုလာတယ်။...